Kulan looga hadlayo Falalka Argagaxisada iyo dhaqan xumada oo Muqdisho lagu qabtay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kulan looga hadlayo Falalka Argagaxisada iyo dhaqan xumada oo Muqdisho lagu qabtay
Kulan looga hadlayo Falalka Argagaxisada iyo dhaqan xumada oo Muqdisho lagu qabtay
Muqdisho (SONNA) Kulankan oo ay iskugu yimaadeen Imaamyada Masjidyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlayay la dagaalanka Xaqjirnimada argagaxisada iyo dhaqan xumada, waxaana soo qaban qaabisay Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya.
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Arimaha Diinta iyo Awqaafta oo ay wehlinayeen Xoghayaha joogtada wasaaradda iyo Agaasimaha Waaxda diinta iyo ku dhaqanka Sharaceeda Islaamka.
Xoghayaha joogtada wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maxamed Qeyroow Aadan ayaa sheegay in wasaaradda diinta iyo Awqaafta aysan ogolaan doonin meelaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriye oo dhaqan xumada sababa, iyadoo la kaashan doona Ciidamada amaanka sidii looga hortagi lahaa.
“Wasaaraddu waxay uga digeysaa Mujtamaca Soomaaliyeed isticmaalka waxyaabaha maanka dooriye loona kaashandoono laamaha amaanka, iyadoo loo baahan yahay in bulshada laga ilaaliyo waxyaabaha dhaqan xumada, wacyi galin joogto ah ayaana laga sameyn doonaa”.
Wasiirka wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Dr.imaan Cabdulaahi Cali ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin Boqolkiiba boqol dad Islaam ah, loona baahan yahay in la iska kaashado wixii umadda Soomaaliyeed lagu badbaadinayo, wasaaraddana ay door wanaagsan ka qaadan doonto arintaasi
“dadkan dadka dilayo ee aan waxba galabsan hadane sheeganaayo Islaam iyo dhaqamada xun xun dhamaan waxyaabahaasi waa wax dhalan rog ah sidaan uga hortagi laheyna ayaa loo baahanyahay in laga fikiro”.
Previous articleDaawo Sawiradda Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta gaaray Baraawe
Next articleAKHRISO: Taliska Ciidanka Xoogga dalka oo qaadanaya Saraakiil Cusub oo dhalinyaro ah